Nadiifinta shinnida & Warshada mishiinada -Shiinaha Nadiifinta Shiinaha & Soosaarayaasha Mashiinada Soosaarayaasha
Taleefanka: +86 311 67663887
Abuurka nadiifiyaha & darajada
Mishiinka Nadiifinta & Farsamaynta Abuurka
Nadiifiyaha abuur Fine
Kala soocida cufisjiidad
Mashiinka dahaarka abuur
Nidaamka cabbirka shandada
Wiishka iyo Gaadhiga
Mashiinka dhalaalka digirta
Durba-nadiifiyaha ka hor
Qalabka Abuurka Shaybaadhka
Khadka farsamaynta abuur
Warshada warshadaynta abuur wareega
Warshada nadiifinta badarka iyo digirta
Warshada warshadaynta abuur
5XZC-7.5DS Nadiifiyaha Abuurka
Nadiifinta abuur iyo habraacyada...
5X-12 nadiifiye abuur wanaagsan / gr...
5XZ-6 Kala-duwayaasha Cuf-jiidadka
5XWY leng dhululubo goglan
5xzs-40ds Nadiifinta Abuurka & Mashiinka Habaynta
5XZS-40DS Nadiifinta Shinnida & Mashiinka Habaynta ayaa leh labanlaab nadiifinta hawo, nadiifinta shaandhada, iyo kala soocida cufnaanta. Qaabkani waxa uu ka kooban yahay hawlo badan oo ku saabsan hal nooc oo mobiil ah oo nadiifinta abuur ah oo ka dhigaya mid ku habboon codsi ballaadhan. Oo waxay leedahay 30-35 tan saacaddii, taas oo caan ku ah qaybta nadiifinta hadhuudhka.
5xzs-10d Nadiifinta Abuurka & Mashiinka Habaynta
5XZS-10D Nadiifinta Shinnida & Shaqada Mashiinka Habaynta: Goynta sarreenka (ikhtiyaarka), nadiifinta hawada, nadiifinta hore ee shaandhada gariirka, kala soocida cufnaanta.
Mishiin Nadiifinta & Farsamaynta Abuurka 5XZS-10DS
5XZS-10DS Shinni Nadiifinta & Shaqada Mashiinka Hagaajinta: qamadida hulling (ikhtiyaarka), nadiifinta hawada, nadiifinta shaandhada gariir hore, kala soocida cufnaanta iyo shaandhada gariirka nadiifinta ganaaxa.
5XZS-10DGT Nadiifinta Abuurka & Mashiinka Hagaajinta
Mashiinka Nadiifinta Shinnida ee 5XZS-10DGT waxaa si gaar ah loogu nashqadeeyey nadiifinta hawada, kala saarista cuf-isjiidadka, kala saarista shaandhada gariirta iyo qiimaynta sare u qaadida hufnaanta nadiifinta, yaraynta jeexjeexa iyo jeexjeexa iyo fududaynta ka saarista & isbeddelka
5XZS-20DS nadiifiyaha shinni nadiifinta hadhuudhka galleyda sisinta
© Xuquuqda daabacaadda - 2010-2021: Dhammaan xuquuqaha way xafidan yihiin.